မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် Federation of Trade Unions Myanmar (FTUM)သည် မြန်မာပြည်သူ တရပ်လုံးအတွက် ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်ရေး၊ လူမှု တရား မျှတရေးနှင့် အလုပ်သမား သမဂ္ဂများ မြန်မာပြည်တွင် ပြန်လည်ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် (FTUM) ကို စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ ယနေ့တိုင် အစဉ်တစိုက် ကြိုးပမ်း လုပ်ဆောင်နေသည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။
Int' Trade Un Trip To Bur
Activities within ITUC and Global Union Federations
Confederation of Trade Unions Myanmar မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ မြန်မာ/အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ (၁/၂၀၁၅) (၂၀၁၅ခုနစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၃ရက်နေ့)
Posted by FTUM at 7/24/2015 06:03:00 PM No comments:
၂၀၁၅ခုနစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ (၂၃)ရက်
Posted by FTUM at 7/24/2015 05:58:00 PM No comments:
CTUM receiving National Registration Certificate
CTUM receiving National Registration Certificate ( 2015 July 23 at Inya Lake Hotel) နိုင်ငံအဆင့် အဖွဲ့ချုပ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ် CTUM အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနား
Today, Chief Registrar U Myo Aung from Ministery of Labour, Employment and Social Security presented the National Registration Certificate to U Maung Maung, President of CTUM at Inya Lake Hotel.During this event,CTUM's affiliates, leaders and members were present.
၂၀၁၅ခုနစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ (၂၃)ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမျိုးအောင်သည် နိုင်ငံအဆင့် အဖွဲ့ချုပ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ် CTUM အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို Inya LakeHotelတွင် ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ထိုအခမ်းအနားတွင် ဦးမောင်မောင် (CTUM ဥက္ကဌ)နှင့် CTUM မိသားစုဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံအဆင့် အဖွဲ့ချုပ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ် CTUM အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို လက်ခံရရှိပါသည်။
Posted by FTUM at 7/24/2015 05:53:00 PM No comments:
၂၀၁၅ခုနစ်၊ ဇွန်လ၊ ၂၂-၂၃ရက်နေ့ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ သတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ သတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
(၂၀၁၅ခုနစ်၊ ဇွန်လ၊ ၂၂-၂၃ရက်နေ့၊ UMFCCI ခန်းမ)
၂၀၁၅ခုနစ်၊ ဇွန်လ၊ ၂၂-၂၃ရက်နေ့များတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ UMFCCI တွင် အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ သတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သည်။
အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအေးမြင့်မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတအကြံပေးများ၊ လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် အလုပ်ရှင် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဦးဝင်းအောင် UMFCCI ဥက္ကဌ၊ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဦးမောင်မောင် CTUM ဥက္ကဌတို့မှ ၄င်းတို့၏ Minimum Wageအပေါ် အမြင်များ၊ ချမှတ်ထားသော ပေါ်လစီများနှင့် အလုပ်ရှင်-အလုပ်သမားများ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် သဘောတူသည့် နူန်းထားသတ်မှတ်နိုင်ရေး စသည့်တို့ကို ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည်။
ထိုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် အစိုးရ-အလုပ်ရှင်-အလုပ်သမား သုံးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံ၍ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေဆိုင်ရာ သဘောတရားများနှင့် နိုင်ငံတကာတွင် ကျင့်သုံးနေမှုများ၊ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေစနစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုများ၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများ၌ အသုံးပြုနေသည့် လုပ်ခလစာပေးသည့်စနစ်ပုံစံနှင့် အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ သတ်မှတ်သင့်သည့်ပုံစံကို ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယနေ့တွင် ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါ်ဝင်းမော်ထွန်း ( အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန)သည် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ပံ့ပိုးပေးသင့်သည့် ကဏ္ဍရပ်များနှင့် မူဝါဒများကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ရာ နိုင်ငံတော်သမ္မတအကြံပေး ဒေါက်တာဇော်ဦးမှ လူမှုဖူလုံရေးအကျိူးခံစားခွင့်များတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အကြောင်းအရာများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အခွင့်အလမ်းများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည့်အခက်အခဲများဆွေးနွေးအဖြေရှာခြင်းနှင့် ဒေါက်တာစိုင်းခိုင်မျိုးထွန်း ( MTUFအလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်) နှင့် ဦးမြင့်စိုး (အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်)တို့ ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည်။
အနည်းဆုံးအခကြေးငွေသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှုများကို အမြဲအတွင်းဝန် ဦးမျိုးအောင် မှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် ဦးအေးလွင် ၊ ဦးအောင်မင်း တို့နှင့် အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသော ဦးအောင်လင်း နှင့် ဒေါ်ဖြိုးစန္ဒာစိုး ( CTUM တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး) တို့မှ သတ်မှတ်သင့်သည့် အနည်းဆုံးအခကြေးငွေအပေါ် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားတို့၏ အမြင်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် လက်ရှိ ရင်ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။
Posted by FTUM at 6/26/2015 05:55:00 PM No comments:
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၁) ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) CTUM လှိုင်သာယာသင်တန်းကျောင်းလှုပ်ရှားမှုများ
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၂-၂၃) ရက်နေ့များတွင် ဆွေးနွေးမည့် အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ နှုန်းထား သတ်မှတ် နိုင်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ရန်အတွက် အနည်းဆုံးအခကြေးငွေဆိုင်ရာ အကြိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေး သဘောထားတောင်းခံခြင်း အစည်းအဝေးကို လှိုင်သာယာမြို့နယ် CTUM သင်တန်းကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်ထုတ်နှင့် စက်မှုလက်မှုအလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ် (IWFM) ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်တင်မိုးခိုင်၊ Yes (1) အထည်ချုပ်စက်ရုံ အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ဝင်းသိင်္ဂီစိုးတို့မှ ဦးဆောင်၍ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်း စက်ရုံ (၁၆) ရုံမှ အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း (၁၅၀) ဦး တက်ရောက်ပြီး တက်ရောက်လာသော အလုပ်သမားများမှ မေးခွန်များမေးမြန်းခြင်း၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Posted by FTUM at 6/23/2015 11:08:00 AM No comments:
၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၁) ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) CTUM လှိုင်သာယာသင်တန်းကျောင်း လှုပ်ရှားမှုများ
(၁) ၁၀၄ ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာညီလာခံ ILC တက်ရောက် ခဲ့သည့် အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ၏ ညီလာခံအတွေ့အကြုံများအား အဖွဲ့ဝင် အလုပ်သမားများအား ပြန်လည် ရှင်းလင်းခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် CTUM သည် (၁၀၄) ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာညီလာခံ ILC တက်ရောက်ခဲ့သည့် ညီလာခံအတွေ့အကြုံများအား ပြန်လည်ရှင်းလင်းခြင်း အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၅ခုနစ်၊ ဇွန်လ၊ ၂၁ ရက်နေ့ CTUM လှိုင်သာယာသင်တန်းကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးတွင် အလုပ်သမားကိုယ်စားအဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့သည့် CTUM ဥက္ကဌ ဦးမောင်မောင်မှ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ၏ ညီလာခံအတွေ့အကြုံများနှင့် အသေးစားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပတ်သက်သော ဆွေးနွေးခဲ့မှုများအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း၊ အလုပ်သမား အကြံပေးကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည့် ဒေါ်ဖြိုးစန္ဒာစိုး မှ Social Protection လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု အစည်းအဝေး ဆွေးနွေးချက်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနှင့် ဒေါ်ခိုင်ဇာအောင်တို့မှ အလုပ်သမား စံနှုန်းများသတ်မှတ်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးချက်များအား ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြပါသည်။ ၄င်းတို့၏ ၄င်းအစည်းအဝေးသို့ အဖွဲ့ဝင် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော
(၁) Charming အထည်ချုပ်စက်ရုံ
(၂) Holly Myanmar အထည်ချုပ်စက်ရုံ
(၃) New Way အထည်ချုပ်စက်ရုံ
(၄) North Shore အထည်ချုပ်စက်ရုံ
(၅) Yes (1) အထည်ချုပ်စက်ရုံ
(၆) Sakura အထည်ချုပ်စက်ရုံ
(၇) Asia Rose အထည်ချုပ်စက်ရုံ
(၈) East Growth အထည်ချုပ်စက်ရုံ
(၉) Korea Link အထည်ချုပ်စက်ရုံ
(၁၀) တက်နေ၀င်းနီ အထည်ချုပ်စက်ရုံ
(၁၂) ရွှေမိ ပလပ်စတစ်စက်ရုံ
(၁၃) Blue Mountain အချိုရည်စက်ရုံ
(၁၄) Coca- Cola အချိုရည်စက်ရုံ
(၁၅) Alpine သောက်ရေသန့်စက်ရုံ
(၁၆) မနီ ခွဲစိတ်ခန်းသုံး အပ်စက်ရုံ
စုစုပေါင်း စက်ရုံ (၁၆) ရုံမှ အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း (၁၅၀) ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
Posted by FTUM at 6/23/2015 10:45:00 AM No comments:
Daw Phyo Sanda Soe (CTUM assistant secretary) listening to the closing comments by the Chairwomen of the 104th International Labor Conference ILC‏
Posted by FTUM at 6/14/2015 06:18:00 PM No comments:
ILO Director General giving the closing speech for the 104th International Labor Conference 2105 June 1 to 13.‏
Posted by FTUM at 6/14/2015 06:08:00 PM No comments:
ILO Director General signing on the Recommendation concerning the transition from the informal to yhe formal economy 2015 June 13‏
Posted by FTUM at 6/14/2015 06:00:00 PM No comments:
အဓမ္မခိုင်းစေမှု ပပျောက်ရေး ယန္တရား
ထပ်ဆင့်နားလည်မှုစာချွန်လွှာ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း (၂၀၀၉)
အမှတ် (၁/A)၊ ကန်ဘဲ့(သစ္စာ)လမ်း၊
(ဖုန်း) +၉၅၁ ၅၆၆၅၃၈၊ ၅၆၆၅၃၉၊ ၅၇၈၉၂၅၊ ၅၇၉၉၅၆
Federation of Trade Unions Myanmar (FTUM)သို့
အမှတ် (၈၆)၊ ပထမထပ်၊ ၁၆၄-လမ်း
တာမွေ (ခ)ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်
(ဖုန်း)+၉၅၁ ၅၅၁၅၂၆၊ဖက်(စ်) ၈၆၀၃၆၉၁၊
ဖေ့ဘုတ်- ftum Myanmar
ဦးအေးချို +၉၅၉ ၂၅၀၀၂၃၉၂၅
အမှတ် (၁၀၇)၊ အောင်မင်္ဂလာပတ်လမ်း၊၂/၆ရပ်ကွက်၊
(ဖုန်း) ဦးမျိုးဇော်ဦး +၉၅၉ ၃၁၃၉၈၅၈၃၊
အမှတ် (၈၄၂)၊ ဓမ္မရတနာလမ်း၊ (၈၉)ရပ်ကွက်၊
(ဖုန်း) ဦးရဲကျော်သူ +၉၅၉ ၄၂၀၁၆၆၇၃၁
ဒေါ်စုမာ +၉၅၉ ၄၂၈၀၃၅၈၀၈
အမှတ်(၃၀၂)၊ W-၁၄၊ ကန်တော်ကြီးအနောက်ခြမ်း၊
သန်လျက်မှော်၊ တောင်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊
(ဖုန်း) ဦးဝင်းနိုင် +၉၅၉ ၄၀၂၆၉၃၃၉
ဦးစိန်လင်း +၉၅၉ ၃၃၀၂၀၀၄၂၁
ဒေါ်ယဉ်မိုး +၉၅၉ ၃၃၁၁၆၆၇၁
FTUB Gen Sec with Minister of Australia
FTUB အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်နှင့် RFA တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း
2013 Jan 20 Japanese MPs with FTUM family
H.E Michihiro Ishibashi,
Mr. NAKAGAWA Masaharu ,
ITUC Yagon Myanmar Office က
Brother Nakajima San
သူတို့က FTUM ကို လာရောက်တွေ့ဆုံတာဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံထဲမှာ မြင်နေရတဲ့ အလုပ်သမားတွေက
တို့များအလုပ်သမားသမဂ္ဂ အလုပ်သမားသမဂ္ဂကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာ တို့အလုပ်သမားထု ၀မ်းသာလို့ကြိုဆိုကြပါစို့။ တို့အလုပ်သမားထုပြုံးပျော်ကာ သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်သင့်တာ ရသင့်သည့်အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများ ညှိနှိုင်း(တောင်းဆို)ကြစို့လား။ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးရရှိအောင် ကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင် အလုပ်ရှင်ဘက်လည်းမျှတလို့ တွေးကြရအောင်တို့ FTUB ပါဝင်ကာ ILOအဖွဲ့လည်းကျေးဇူးပါ စုပေါင်းကာတိုင်ပင်လို့ ကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင်များ ညီညွှတ်စို့။
မြန်မာနိုင်ငံရှိအလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအကြားစေ့စပ် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် FTUM အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင် ဦးဆောင်၍ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသည်။ ထိုလှုပ်ရှားမှုကို ကူညီဆောင်ရွက်ရန် ITUC, ITUC/AP, GUF, SSO စသည့် နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်များမှ ITUC မြန်မာရုံးအား တည်ထောင်၍ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
Changes in Myanmar – an employers perspective
It is genuine. This is my feeling. It is genuine. I think almost every person I know, they feel great with the changes except the isolation and sanctions are there. We need the international community and organizations to trust in us. After so many of sanctions, we lost the access to the market and still. Even though some suspensions of sanctions are there from European Union and from the United States but then, as an employer's view, who will come and invest with one year of suspension of period? They will wait and they will see. So, I don't think many changes will be there if some binding are still there. That's why, I said here. Free all the barriers! Let us move freely. How can the whole world call for decent job, employment, social justice? I always feel that we are not treated justifiably. I always feel that. One thing, I would like to add also. I always see that we are the business prisoners of Myanmar. Business Prisoners! Inside our country, they barred us not to do business with this, that. We don't have our choice of work. We don't have choice to buyers to work with. They come and choose us. We have to work with them. Whoever comes and invests but we don't have the choice. Where the justice for us? I want to tell the whole world like that. We have no justice. We are not treated justifiably but even then, you heard here right. We are working, doing for our people here. We take care of our workers. How much pressures, international are giving us? We do our job for our people, for our workers with the global compact. We committed. The I am the chairman of CSR unit. Yes, we have the new unit. formed in our achievement of association in this year. I am the head of the unit. We launched already HIV, AIDS scheme in the different fields, working environment and we will not stop there. We will go on the TB, Malaria, we will go on the livelihoods of the people, workers, and we will go on the environment. From the business community to the community at large. That is our goal. With all these restrictions, how much we can go? How far can I run? I said. Our feet how about! And then, they told us, you run. How far and how far can I run? It is very difficult for us. Free all the bindings! all the barriers! Watch what we are doing!
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ချုပ်၌ ပြုလုပ်သော ဒေါ်စု၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
မျက်ရည်မဲ့-ပြည်တွင်းစစ်တွေရပ်ကြပါ
FTUB အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်ရဲ့ ပြည်တော်ပြန်ခရီး
ILO ညီလာခံမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတင်းစာရှင်းလင်း (ရုပ်သံ)
RFA TV Magazine June 16, 2012
MITU and AFFM's May Day
Myanmar needs democracy-friendly development growth, says Aung San Suu Kyi Changes in Myanmar –aworkers perspective Aung San Suu Kyi and the ILO The ILO’s role in Myanmar ILO’s Somavia wams of “vicious downward economic spiral” East Asia 2012 – A Conversation with Daw Aung San Suu Kyi East Asia 2012 – The Promise and Future of Myanmar East Asia 2012 – Press Conference with Daw Aung San Suu Kyi
CTUM receiving National Registration CertificateCT...
► 2012 (4830)
Federation of Trade Unions-Myanmar (FTUM)
child soldier (85)
copper mine (185)
factory workers (75)
fisher men (10)
forced extortion (15)
forced relocation (53)
Foreign Investment (338)
freedom of association (215)
gold worker (35)
hunger strike (11)
int'l workers strike (1)
International Trade Union (6)
land confiscation (504)
migrant workers (491)
mine worker (16)
Minium Wages (5)
peacefully protect (2)
prisoner porters (1)
Right to strike bill (1071)
strike law (7)
violation of workers' rights (3)
worker rights (117)
working condition (14)
်Foreign Investment (1)
င်္Freedom Of Association (3)